မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရား၏ အနာဂတဘယ သုတ် တရားတော် အသံသွင်းခွေမှ တတိယ အနာဂတ်ဘေးနှင့် ဆိုင်သော အပိုင်းကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။ ဤအပိုင်းမှာ အရေးကြီးသည်။
အနာဂတ ဘယ ဟူသည်မှာ အနာဂတ်ဘေး ဖြစ်ပါသည်။ အနာဂတ် ဆိုသည်မှာ ဘုရားရှင်ထင်ရှား ရှိတော် မူသောခေတ်မှ အလွန်ပင် ဖြစ်သည်။ မြတ်စွာဘုရား ထင်ရှားရှိတော် မူသောခေတ်၌ မူ မဖြစ်ပေါ်သေး။ နောက်ကာလ များ၌ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မျက်မှောက်ကာလ ရှိ ဖြစ်ပေါ်ဆဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ဖြစ်ပေါ်လတ္တံ့ဘေးကြီးများ ကိုဆိုလိုသည်။ ဘေးဟူသည်မှာ သာသနာတော်၏ ဘေးလည်းမည်၏။ သတ္တ၀ါတို့၏ ဘေးလည်း ဖြစ်သည်။
အန္တရာယ် တစ်ခုခု ကျရောက်မည်ကို တင်ကြိုသိထားပါက ကြိုတင်ကာကွယ်မှု လုပ်ထားနိုင်သဖြင့် ရှောင်တန်သမျှ ရှောင်နိုင်သည်။ ယခုလည်း အနာဂတ်ဘေးများကို ကြုံတွေ့ပါက ထိုဘေးများ အကြေင်း သုတ ပညာ ရှိသူ များသည် သက်သာတန် သ၍ သက်သာနိုင်မည်ကို ရည်ရွယ်၍ ကောက်နုတ် ဖော်ပြပါသည်။ ဤတတိယ ဘေးကား မလျော်ကန်သော တရားဓမ္မ ဒဿန ဆွေးနွေးမှုများကို ဆိုလိုပါသည်။
***"ကာယ ဘာဝနာတို့၊ သီလဘာဝနာတို့၊ စိတ္တဘာဝနာတို့၊ ပညာဘာဝနာတို့ အဲဒါတွေနဲ့ မပြည့်စုံဘဲနဲ့ အဘိဓမ္မာ ကထာ( အဘိဓမ္မာ ကထာဆိုတာက ဒီနေရာမှာ အဋ္ဌကထာက ဖွင့်ထားတာကတော့ ဥတ္တမကထာ လို့ခေါ်တဲ့ မြတ်တဲ့ တရားတွေ သမထ ၀ိပဿနာ တရားတွေကို ပြောတာတဲ့။) သမထနဲ့ စပ် ၀ိပဿနာ နဲ့စပ်ပြီးတော့ သကာလ တရားစကားတွေ ပြောတာ။ ဝေဒလ္လ ကထာ ဆိုတာကတော့ မဟာဝေဒလ္လ တို့ စူဠဝေဒလ္လ တို့မှာပါတဲ့ ဥာဏ်ပညာ နဲ့ ပီတိပါမောဇ္ဇ တွေဖြစ်ပြီးတော့ အမေးအဖြေ လုပ်ရတဲ့ တရားဆွေးနွေးရတဲ့ တရားစကားတွေပါပဲ။ ပြောကြတဲ့ အခါကျတော့ ကိုယ်က ဒီသမာဓိ၊ပညာ တွေကို လေ့လာ ပွားများထားတာ မဟုတ်တဲ့ အခါကျတော့ စိတ်ကူးနဲ့ သူက ပြောရမှာကိုး။ ကိုယ်မသိတာတွေ ကိုယ်မနိုင်တာတွေ ထင်ရာမြင်ရာ လျှောက်ပြီးတော့ ပြောတဲ့ အခါကျတော့ လွဲတာမှားတာ တွေလည်း ရှိကုန်မှာပေါ့။ သူများတွေလည်း အထင်အမြင် လွဲတာတွေ ရှိသွားဦးမယ်။ သူများတွေကို ကိုယ်က မမှန်ပါဘဲလျက် သူများမှန်နေတာတွေကို အမှားထင်ပြီးတော့ အဲဒီလို ရှူတ်ချပြီးပြောတာတွေလည်း ရှိလိမ့်မယ်။ သူများတွေကို ပစ်ပယ်ပြီး ပြောတာ လည်းရှိလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ပွားများ လေ့လာထားတာ မဟုတ်တော့ ကိုယ်မနိုင်တဲ့ ဥစ္စာဆိုတော့ ပြောလို့ရှိရင် ကိုယ်က အနိုင်ရအောင်ဆိုပြီး တစ်ခါတည်းပြောတော့ အဲဒီမှာ သူများတွေကို ရှူတ်ချ၊ တရားအမှန်တွေကို အမှားလုပ်၊ အမှားတွေကို အမှန်လုပ် မဟုတ်တာတွေ လျှောက်ပြောမိ အဲဒါတွေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။
အဲဒါကို အန္ဓဓမ္မတွေတဲ့။ မည်းညစ်သော တရားတွေ။ တနည်းအားဖြင့်တော့ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ ဖြစ်စေနိုင်သော တရားစကားတွေလည်း ပြောလိမ့်မယ်တဲ့။ မိမိလာဘ်လာဘ ရအောင် ဘုန်းကြီးအောင် စသည်ပေါ့လေ။ ဒီလိုဟာတွေ။ အဲဒါတွေနဲ့ပဲ ပြောပါလိမ့်မယ်တဲ့။ ပြောပေမဲ့လို့လည်း သူက မသိဘူးတဲ့။ ကိုယ့်ဥစ္စာကိုယ် လမ်းမှားနေမှန်းဘာမှန်း မသိဘဲ ရှိလိမ့်မယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တရားဆိုတာ အားထုတ်မထားလို့ရှိရင် တယ်မသိဘူး။ တရားအားထုတ် မထားရင် ကိုယ့်မှာ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ တွေ မကောင်းတာတွေ ဖြစ်နေတာကို မကောင်းမှန်း တယ် မသိဘူး။ တရားနှလုံးသွင်း အားထုတ်ပြီးထားတဲ့ အခါကျတော့ အစထဲက စိတ်သန္တန် တွေက သိမ်မွေ့နူးညံ့ပြီးတော့ နေတော့ မကောင်းတဲ့ တရား ၀င်လာရင် အင်မတန်သိတာပဲ။ လောဘ ဖြစ်လာတာ သိတယ်။ ဒေါသ ဖြစ်လာတာ သိတယ်။ ကိုယ့် ရိုးရိုးလေး အတွက် ငဲ့ပြီးတော့ ပြောမိ ဆိုမိတာလေးတွေ သိတယ်။ သူတစ်ပါးတွေကို မရိုမသေ ပြောမိတာတွေ ကိုယ်လွဲမှားသွားတာလေးတွေ အင်မတန်သိတာပဲ။ အင်မတန် ထင်ထင်ရှားရှား သိတယ်။ ချို့ယွင်းသွားလို့ရှိရင် ချို့ယွင်းသွားမှန်း သိပ်သိတယ်။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ နှုတ်ချို့ယွင်း သွားလို့ ပြောမိသွားရင် နောက်ဆက်ပြီးတော့ မပြောဘူး။ မှားသွားပြီဆိုရင်။ ထိန်းသိမ်းတယ်။ တရားနှလုံးသွင်း အားထုတ်မှု မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ ထိန်းသိမ်းတဲ့ နည်းလည်း သူ့ရှိတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ ရှိတာမဟုတ်တဲ့ အခါကျတော့ နင်းကန်ပြီးတော့ပြော သူများတွေကို ချိုးဖဲ့ပြော သူများဟုတ်တာတွေကို မဟုတ်တာလုပ်ပြီး တရားမှန်တွေ တရားမှားလုပ်ပြီး သကာလပြော မိမိဘုန်းကြီးအောင် လာဘ်လာဘ ပေါများအောင် သူများတွေ အထင်အမြင်ကြီးအောင် လျှောက်ပြီး သကာလပြော ဒါတွေလုပ်တော့ သူ့ဥစ္စာ မကောင်းတာတွေ လုပ်နေတာပဲ. မည်းညစ်တဲ့ အကုသိုလ်တရားတွေ သူ့ကိုဝင်နေတာ ဒါပေမဲ့လို့ သူမသိဘူးတဲ့။ အဲဒါဟာ သမထ ၀ိပဿနာ ကိုယ်ကျင့်တရား တွေပျက်လို့ စောင့်စည်းတဲ့ ၀ိနည်းကျင့်ဝတ်တွေ။ ၀ိနည်း ကျင့်ဝတ်တွေ ပျက်တော့ကို သမထ ၀ိပဿနာ တရားတွေ ပျက်သွားတာ။ ဒါဟာ အနာဂတ် ဘေးတစ်ခုပါပဲ။ တတိယ အနာဂတ်ဘေး တဲ့။ အဲဒါ မပျက်အောင် စောင့်စည်းရမယ်။ လိုပါတယ်။"***
အင်္ဂလိပ်စကားပုံ၌ Little knowledge is dangerous. ဟူ၍ ရှိသည်။ လောကနီတိ ဆရာကလည်း အပ္ပပညော မဟာသကော အပ္ပပူရော ဃဋ္ဋောခေါဘေ (ညံ့လွန်းလျင်လည်း အန္တရာယ်မရှိ။ တော်လွန်းရင်လည်း အန္တရာယ်မရှိ။ မညံ့တညံ့(၀ါ) မကျက် တကျက် သာ အန္တရာယ် ရှိတယ်) ဟူ၍ ဆိုသည်။
အခြားအနာဂတ် ဘေးများကိုလည်း ထိုက်သင့်သလို တင်ပြပေးသွားပါမည်။ သုတ ပညာ တိုးပွားကြပါစေ။